को-रोनाको महामारीमा सबैले थाहा पाई राख्नुपर्ने कुरा , के कारणले लाग्छ त लामो समय रुघा ? – List Khabar
Home / समाचार / को-रोनाको महामारीमा सबैले थाहा पाई राख्नुपर्ने कुरा , के कारणले लाग्छ त लामो समय रुघा ?
admin January 14, 2022 समाचार Leaveacomment 100 Views
को-रोनाको महामारीमा सबैले थाहा पाई राख्नुपर्ने कुरा , के कारणले लाग्छ त लामो समय रुघा ? अहिले को- रोना भाईरसको महामारी चलिरहेको छ ।
यस्तो बेलामा ज्वरो आउने , खोकी लाग्ने , टाउँको दुख्ने, रुघामर्की लाग्ने र आँखाको नानी दुख्ने लक्षणहरु देखिएकी सावधान हुन जरुरी रहेको छ । यस्तै लामो समय सम्म रुघामर्की लागिरह्यो भने पनि त- नाव हुने बेला हो यो । के कारणले लामो समयसम्म रुघामर्की लागिरहन्छ त भन्ने बिषयमा आज हामी तपाईलाई जानकारी दिदै छौ ।
१) त-नाव :- आजकल धेरै मानिस त-नाव लिइरहेका हुन्छन् । त-नाव नै धेरैथरी रोगको कारण हो भनी धेरैथरी अनुसन्धानले देखाएका छन् । तपाईंलाई पनि लामो समयसम्म रुघा लागेको छ भने चिकित्सकबाट परीक्षण गराउनुस् किनकि तनावका कारण पनि यसो भएको हुनसक्छ ।
२) गलत खानपिन:- बिरामी भएपछि धेरैजसो मानिसले खानपिन छोडिदिन्छन् वा मसलायुक्त खानेकुरा खान्छन् । यसले शरीरलाई हानि गर्छ । बिरामी हुँदा शरीरलाई पोषक तत्त्व दिनुपर्छ । सही खानपान नहुँदा रुघाले लामो समयसम्म सताउँछ ।
३) कम पानी पिउनु:- मानिसहरू गर्मीमा भन्दा जाडोमा कम पानी पिउँछन् जसले गर्दा शरीरमा पानीको मात्रा पुग्दैन । अझ बिरामी हुँदा शरीरलाई पानीको धेरै आवश्यकता पर्छ । पानी, जुस र सूप प्रशस्त पिउनुस् ।
४) निद्रा:- व्यस्त जीवनशैलीका कारण मानिसहरू भरपूर निद्रा लिन पाउँदैनन् जसले गर्दा उनीहरूको रुघा ठीक हुँदैन । पूरा निद्रा लिनुभयो भने छिट्टै ठीक हुनुहुनेछ ।
५) व्यायाम:- आवश्यकताभन्दा बढी व्यायामले पनि स्वास्थ्यलाई हानि गर्छ । बिरामी हुँदा व्यायाम गर्नु हुँदैन । रुघा लाग्दा एकदमै हलुका व्यायाम मात्र गर्नुस् ।
Previous यी युवतीको टिकटकमा यस्तो हर्क’त, यतिबेला भिडियो भयो भाइरल (हेर्नुहोस भिडियो)
Next काठमाडौं उपत्यकामा कति संक्रमण पुष्टि ?